Momba anay - Pro-Lean Technology Co., Ltd.
Antsoy ny fanohanana +86 15361465580
Fampifangaroana fitotoana sy fihodinana
Famaranana ambonin'ny tany
PROLEAN HUB dia loharanom-pahalalana ho an'ny orinasa teknolojia sy fanombohana mamokatra fitaovana vaovao.Ny tanjonay dia ny ho lasa mpamatsy vahaolana lehibe amin'ny famokarana On-Demand.Mba hahatratrarana izany dia miasa mafy izahay mba hahatonga ny famokarana ho mora, haingana ary mitsitsy amin'ny prototyping mankany amin'ny famokarana.
Manova ny hevitrao ho vokatra izahay amin'ny alàlan'ny fizotranay voatanisa tsara.
Rehefa manana hevitra vaovao ianao,
na zavatra mamorona.
mifandraisa aminay injeniera.
Afaka mifandray amin'ny injenieranay 24 ora isan'andro ianao.Hanombantombana avy hatrany ny fahasarotan'ny tetikasa izy ireo ary hanome anao tolo-kevitra sy teny nindramina.
Dia miandry herinandro vitsivitsy fotsiny dia ho tanteraka ny hevitrao.
Manompo mpanjifa manerana izao tontolo izao izahay amin'ny indostria isan-karazany, ao anatin'izanyrobotika, fiara, aerospace, ary entana fonosan'ny mpanjifa…
Amin'ny fampifangaroana ny fahaiza-manaon'ny tambajotra miaraka amin'ny fahaiza-mamokatra ao an-trano, dia afaka manome ny mpanjifanay miditra amin'ny vidiny haingana, tombanana ny fotoana fitarihana, ny fizotran'ny famokarana ary ny fisafoana feno.
Afaka manome valin-kafatra avy hatrany amin'ny famokarana ho an'ny mpanjifa izahay sady mamaritra ny vahaolana mahomby sy mahomby indrindra amin'ny famokarana ny ampahany tsirairay.
Tombanana ny fotoana hitarika
Famokarana dingana Track
Fanaraha-maso feno dimensional
Ny fizotry ny famokarana ataonay dia manome antoka ny mpanjifa hahazo vahaolana feno amin'ny filana rehetra.Anisan'izany ny kojakoja sarotra sy mazava tsara, toy ny kojakoja optika, kojakoja fiara, fitaovana fitsaboana na kojakoja aerospace.
Aorian'ny fizotry ny fanononana dia manome Certificate Material izahay mba hanamafisana ny fitaovana mety.Ny rafitra fanaraha-maso kalitao dia natao hanara-maso ny asa tsirairay, manomboka amin'ny fanamboarana, hatramin'ny famokarana, miaraka amin'ny fandefasana ara-potoana ho an'ny mpanjifantsika.Amin'ny fotoana voasava ny vokatra ary vonona amin'ny fanaterana dia harahina ny tatitra momba ny fanaraha-maso feno.
Fanavaozana ny fivoaran'ny tetikasa amin'ny fotoana tena izy
Haingana sy rafitra ny asantsika!Manomboka amin'ny fifandraisana voalohany aminay, hatramin'ny fanaterana kojakoja azo antoka, dia mikarakara ny tetikasan'ny mpanjifa izahay.Manao fanavaozana ny mpanjifa momba ny toetry ny famokarana izahay, amin'ny fampiasana taratasy fanaraha-maso ny tetikasa izay alefa amin'ny mpanjifa isan-kerinandro.ny mpanjifa dia afaka mahita mazava ny toe-javatra famokarana ny tetikasany.
Nahoana no PROLEAN HUB
- Mitahiry vola amin'ny alàlan'ny fizotry ny famokarana amin'ny fangatahana
- Fihodinana fohy kokoa eo amin'ny fifaninanana (sy ny taham-pahombiazana ambony kokoa)
- Mamorona safidy famolavolana miovaova ho an'ny vokatrao rehetra
- Manome anao safidy feno ho an'ny famokarana tetezana
Ny vinan'i Prolean dia ny ho lasa mpamatsy vahaolana lehibe indrindra amin'ny famokarana on-demand.
Ny 5 mahazatra indrindra plastika tsindrona moldi ...
Karazana plastika 6 maty, fantatrao ve ireo...
Famolavolana tsindrona: Fijerena ny teknolojia, A...
Famolavolana hevitra sy fomba fanatsarana ny...
Fanatsarana ny fandrafetana ny tapany metaly...
Adiresy: Building A1, Fuhai Technology Industrial Park, Fuyong Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen
Rafitra fanaraha-maso ny tetikasa Prooess
Copyright © 2022 ProLean.Zo rehetra voatokana. Hot Products>
Ny fototry ny milina Cnc Masinina Fabrication Fabrication vy metaly Serivisy fanariana metaly Prototype Machine Haben'ny famolavolana plastika